Apple Pie mofomamy mofomamy ambany! - Fomba Fanamboarana
salady salady miaraka amin'ny voankazo sy voanjo
inona no lovia no mandeha miaraka amin'ny maitso collard
Taco meksikana atsoboka amin'ny hen'omby
Apple Pie mofomamy mofomamy ambany!
Tiako ny paoma paoma ary tiako ny fromazy ka nieritreritra aho… maninona? :) Nahita sary pie nivadika teo aloha aho… tena milay izany ary nieritreritra aho fa hahafinaritra ny manandrana! Ny ampahany tsara indrindra dia .. ny fahafantarana fa hovadiko tampoka ity zazalahy ratsy ity, tsy maninona izay endrik'ilay tampon'ny pie-ko. Tsy nila niahiahy momba ny ho firy miaraka aminy aho!
Rehefa vonona ny hikorisa ny pie anao ianao dia ampiasao antsy dibera ary alao antoka fa malalaka ny sisiny ary tsy miraikitra avy eo…. MANDRITRA ANAO fotsiny. Aza mandeha miadana, aza matahotra, ataovy fotsiny ny FLIP dia hivoaka milamina sy tsara tarehy izy.
Nampiasa resipeo fromazy namboarina avy amin'ny ahy cheesecakes mini ary narotsany tao anaty poti-pie. Avy eo nopetahako paoma mamy izany ary nopotsiko tao anaty lafaoro. Ity mofomamy ity dia ho iray amin'ireo pie na cheesecakes tsara indrindra azonao! Ny tiako holazaina dia hoe… ity no tsindrin-tsakafo iray izay lasa adala ara-bakiteny ny zanako!
Hitako ny crust manamboatra ny flaky sy marefo indrindra ao a lovia pie seramika . Notehiriziko tao anaty vata fampangatsiahana ity pie ity. Raha manana ambiny ianao, dia ny fonosana mofomamy vita amin'ny pie ihany no hosaronanao amin'ny fonosana plastika fa avelao hisaron-takelaka ny crust, izany dia mitazona azy tsy ho rendrika.
dips chip vita amin'ny fromazy fanosotra
Entana ilainao amin'ity recette ity:
* lovia pie amin'ny seramika (na vy) * fromazy fanosotra * mifangaro *
Apple Pie mofomamy mofomamy ambany
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo1 ora 5 ORA 10 minitra Fotoana manontolo1 ora 10 minitra Fanompoana8 MpanoratraHolly Nilsson Tiako ny paoma paoma ary tiako ny fromazy… koa maninona? Tsy mampino ilay fifangaroana! pirinty Pin
▢ Crust pie voaomana ho an'ny mofomamy crust roa toy ny Pillsbury na ny fomba fahandro pie crust tianao indrindra
▢rOA x 8 froma crème crème nihanalefaka
▢1 sotrokely lavanila
▢6 paoma lehibe voahitsakitsaka ary notetehina manify (tokony ho 1/8 ″)
▢rOA sotrokely ranom-boasarimakirana
▢rOA tablespoons koba tsara toto
▢rOA sotrokely kanelina tany
▢saosy karamel raha aroso tsy voatery
Afanaina hatramin'ny 400 ° F ny lafaoro. Apetraho amin'ny vilany pie miaraka amin'ny crine pie eo ambany.
Miaraka amin'ny mixer amin'ny avo, atambaro fromazy crème, siramamy ½ kaopy ary lavanila mandra-pahatongan'ny volony. Ampio atody ary afangaro mandra-pahatonga azy. Arotsaho ao anaty ilay crème crème ny menaka fanosotra fromazy.
Ao anaty lovia lehibe, atambatra paoma, ranom-boasarimakirana, siramamy ½ kaopy, lafarinina ary kanelina. Apetraho moramora eo ambonin'ireo fifangaroan'ny fromazy ny paoma.
Paoma ambony miaraka amin'ny crème pie faharoa manodina ny crust ao anaty mba hanendasana. Maneteza hady kely vitsivitsy ao an-tampon'ny pie.
Asio lapoaly miaraka amina taratasy mofomamy ary apetaho amin'ny lapoaly ny pie. Sarony moramora amin'ny sombina foil ary manendasa 30 minitra. Esory ny foil ary manendasa 30 minitra fanampiny na mandra-pahatonga ny paoma hahatsiaro ho malefaka rehefa atsofoka antsy. Esory amin'ny lafaoro ary mangatsiatsiaka 10 minitra.
Apetraho eo ambonin'ny tampon'ny pie ny takelaka lehibe iray ary atodiho ambony ambany ilay izy ary avelao eo ambony lovia ny pie. Mangatsiatsiaka 1 ora eo amin'ny latabatra ary ampangataho mandritra ny adiny 4 na amin'ny alina. Aroso mangatsiaka amin'ny saosy karamela.
Kaloria:291,Karbohidraty:56h,Proteinina:3h,Tavy:6h,Tavy mahavoky:rOAh,Cholesterol:41levitra,Sodium:105levitra,Potasioma:181levitra,Fibre:4h,Sugar:39h,Vitamina A:135IU,Vitamina C:6.8levitra,Kalsioma:2. 3levitra,Vy:1levitra
Teny lakilepoma fromazy Mazava ho azytsindrin-tsakafo masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
* Apple Pie Tacos * Apple Pie Cupcakes * Ny alina Apple Pie French Toast Casserole *